Daqiiqado yar yar iyo safarada macaamiisha | Martech Zone
Monday, August 24, 2015 Khamiista, Febraayo 25, 2021 Douglas Karr
Warshadaha suuqgeynta internetka ayaa sii wadaya inay horumar ka sameeyaan bixinta tikniyoolajiyadda u sahlaysa suuqleyda inay labadaba saadaaliyaan oo ay bixiyaan khariidado lagu caawiyo macaamiisha iyo ganacsiyada inay beddelaan. Waxaan sameynay xoogaa mala-awaal ah illaa heerkaan, in kastoo. Mawduuca guud ee shakhsiyaadka shakhsiyadeed iyo iibka iibku aad ayuu uga sii jilicsan yahay uguna dabacsan yahay sidii aan waligay malayn.
Cisco waxay soo bandhigtay cilmi baaris in celceliska badeecada la iibsaday ay ka badan tahay 800 oo safar macaamiil oo kala duwan oo u horseedaya. Ka fikir go'aannada iibsigaaga iyo sida aad uga soo kabato inta u dhexeysa cilmi baarista, khadka tooska ah, dukaanka, emaylka, raadinta, iyo xeeladaha kale inta aad ku sii socoto wadada go'aanka. Layaab maleh sababta xirfadlayaasha iibka iyo suuqgeynta ayaa la halgamaya sifeyn aad u badan. Sidoo kale waa sabab kale suuq geynta omni-channel waa in si taxaddar leh loo agaasimaa si loo hagaajiyo natiijooyinka.
Haddii aad saadaalin karto oo aad bixin karto suuqgayn ka horreysa safarka macaamilka, waad yareyn kartaa khilaafka oo waxaad u horseedi kartaa iibsashada si hufan. Xaqiiqdii, cilmi-baarista ka socota Cisco waxay muujineysaa in dukaamada ay bixiyaan Internetka Wax walba khibradaha waxay qabsan kartaa boqolkiiba 15.6 horumarin faa'iido.
Isku dar natiijooyinkaan Ka fikir Qolka-yar ee Google cilmi baaris waxaanna uga harnay 4 daqiiqado yar yar oo suuq kasta uu u fiirsanayo:
Waxaan rabaa inaan ogaado daqiiqado - 65% macaamiisha internetka waxay ka raadiyaan macluumaad dheeri ah khadka tooska ah dhowr sano ka hor. 66% dadka isticmaala taleefannada casriga ah waxay eegaan wax ay ku arkeen xayeysiiska telefishanka.
Waxaan rabaa inaan tago daqiiqado - 200% kordhinta "ii dhow" raadinta iyo 82% dadka isticmaala taleefannada casriga ah waxay adeegsadaan mashiin raadin si ay u raadsadaan ganacsi maxalli ah.
Waxaan rabaa inaan sameeyo daqiiqado - 91% dadka isticmaala taleefannada casriga ah waxay u jeestaan ​​taleefannadooda si ay fikrado u helaan iyagoo hawl qabanaya iyo in ka badan 100 milyan oo saacadood oo ah sida wax loo qoro ayaa ilaa hadda laga daawaday Youtube-ka. sanadkaan.
Waxaan rabaa inaan iibsado daqiiqado - 82% dadka isticmaala taleefannada casriga ah waxay la tashadaan taleefannadooda inta ay ku jiraan dukaan iyagoo go’aansanaya waxa ay iibsanayaan. Tani waxay keentay 29% koror ah sicirka beddelashada mobilada sanadkii la soo dhaafay.
In kasta oo Google ay diiradda saareyso adeegsadaha mobilada, waa inaad garataa sida tani u saameynayso safar kasta oo macaamiil ah - laga soo bilaabo soo iibsiga illaa xumaan ama cusbooneysiin uun. Xaqiiqdu waxay tahay inay tahay inaan sifiican uga fiicnaano beegsiga waxyaabaha keenaya iibsashada daqiiqadaha go'aanka. Ku dar dadka qaababka barashada iyo walxaha dhiirrigeliya iibsashada mana aha wax lala yaabo sababta ay suuqleyda ugu dhibtoonayaan soo saarista waxyaabaha keenaya is-beddelka. Falanqeyntu ma bixinayso aragti kuwan ku saabsan waana sababta ay suuqleyda waxyaabaha ka kooban ay u raadinayaan xog dheeraad ah xalka si loo saadaaliyo loona cabbiro waxqabadkooda.
Tags: dhacaCiscoContent SuuqisbeddelkaSafarka macaamiishaWaxaan rabaa inaan iibsadoWaxaan rabaa inaan sameeyoWaxaan rabaa inaan tagowaxaan rabaa inaan ogaadodaqiiqado yar-yarmicromomentskula fikir Google